XOG Cajiib Ah: Imisa Maalmood Gudohood Ayay Zinedine Zidane & Cristiano Ronaldo Ka Tageen Kooxda Real Madrid – Kooxda.com
XOG Cajiib Ah: Imisa Maalmood Gudohood Ayay Zinedine Zidane & Cristiano Ronaldo Ka Tageen Kooxda Real Madrid
Kooxda Real Madrid ayuu xagaagan u yahay midkii ugu xumaa ee soo mara taariikhda kooxda Marka loo eego in ay ka tageen laba ka mid ah kuwa ugu fiican taariikhda kooxda Los Blancos.
Real Madrid ayaa wayday adeega tababarihii ugu horeeyay ee kooxda ku hogaamiyay 3 champions League oo xiriir ah kadib markii uu Zinedine Zidane ka tagay kooxda shan maalmood kadib markii uu kooxda ku hogaamiyay hanashada champions League 3-aad oo xiriir ah
Xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo ayaa isaguna si Rasmi ah uga tagay kooxda Real Madrid kadib markii uu uu ku biiray kooxda Juventus.
Xiddigii ugu fiicnaa ee soo mara taariikhda kooxda gaar ahaan jiilka haatan kaas oo dhaafay halyeeyo badan oo ay ka mid yihiin Alfredo Di Stefano.
Bixitaanka xiddiga ayaan ka yaabsan dad badan marka loo eego in uu xiddigan si maldahan uga hadlay mustaqbalkiisa kadib finalkii koobka adduunka laakiin ma ahayn mid la sawiran karon in ay Zinedine Zidane iyo Portugal hal xagaag ka tagaan kooxda.
Sidee ayay Real Madrid ugu ogolaatay in ay bil gudohood hal mar ka tagaan kooxda laba halyeey oo isku qoray taariikhda kooxda, Sidee ayuu Florentino Perez ku wajihi karaa xilli ciyaareedka 2018/2019 isaga oo ay ka maqan yihiin laba ka mid ah kuwii ugu fiicnaa 15-kii sano ee uu haystay kooxda.
Arintaas la yaabka leh ayaa dhacday muddo 40 maalmood gudohood ah oo ay xiddiga iyo Zidane-ba boorsooyinkooda ka qaateen kooxda Los Blancos.
Los Blancos ayaa haatan wajahaysa tartan adag oo ah in ay sii wado ku guulaysiga koobabka iyada oo ay ka maqan yihiin tababarihii iyo xiddigii suurtagaliyay 3-da champions League ee xiriirka ah iyo waliba horyaalkii iyo champions League xilli ciyaareedkii 2017.
Kooxda Ayaa U baahan 2 ama ama 3 xiddig oo heer caalami ah oo buuxiya goolasha,tayada iyo waliba hogaamiyanimadii ay kooxda kala tageen Zidane iyo Ronaldo